सावधान ! तस्बिर र भिडियोमा हेर्नुहोस्, मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डका १८ ‘एम्बुस’ ! - Ratopati
मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डमा यात्रा गर्नु सजिलो छैन्, ड्राईभर र यात्रु दुवैका लागि । एकातिर अफ्ठ्यारो सडकले दुर्घटनाको डर, अर्कोतिर बनाउँदै सडकमा धुलैधुलो । यो सडक खण्डमा यति मात्र जोखिम होइन । झन्डै डेढ दर्जन पुल कति दयनीय अवस्थामा छन् भने ड्राइभरको सानो गल्तीले हुन्छ ठूलो मानवीय क्षति ।
रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगाल र फोटो पत्रकार बिजु महर्जनले यो सडक खण्डमा रहेको पुलको अवस्था के छ भनेर ‘रियालिटी टेस्ट गरेका छन् ।’ रातोपाटी टिमले ‘ग्राउन्ड जिरो’बाट गरेको रिपोर्टिङ र त्यहाँ देखिएको अवस्था हेर्दा पुलहरू ‘एम्बुस’ जत्तिकै खतरनाक छन् । अर्थात सानो असावधानी, ठूलो दुर्घटना । सानो गल्ती, ठूलो क्षति ।
मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड विस्तार तथा स्तरन्नोति आयोजना ०७४ वैशाखसम्म सक्ने लक्ष्य थियो । तर तोकिएको समयभन्दा एक वर्षले ढिलाइ हुने भएको छ । अर्थात यात्री र ड्राइभरले अरु एक वर्ष ‘एम्बुस’ छल्दै यात्रा गर्नुपर्नेछ । यो आयोजनाको निर्माण २०७२ असारबाट सुरु भएको हो ।
अहिलेसम्म आयोजनाको २९ प्रतिशत काम मात्र पूरा भएको छ । कुल तीन अर्ब रुपियाँको आयोजना हो र ७५ करोड मात्र खर्च भएको छ । आयोजनामा विश्व बैङ्कको दुई अर्ब ९० करोड रुपियाँ ऋण सहयोग रहेको छ । सरकारले विकास खर्च बढाउन निर्देशन दिइरहको छ ।
मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डका धेरै पाटा छन् । यो साता हामीले तिनै पाटाहरु खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ । तपाईंलाई चितवनको मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्डमा रहेका खतरनाक पुलबारे जानकारी दिँदैछौँ । जुन पुलमा सयौं दुर्घटना भए, जसबाट हजारौं व्यक्ति दुर्घटनाको सिकार भए ।
काठमाडौँदेखिको पृथ्वी राजमार्ग मुग्लिनबाट छुट्नेबित्तिकै सुरु हुन्छ मुग्लिन–नारायणघाट राजमार्ग । ३६ किलोमिटरको दूरीको यो सडक खण्डमा १८ वटा पुल छन् ।
यी १८ वटा पुलहरु सवारी साधन र मानिसले सडक वारपार गर्ने पुल भए पनि यथार्थमा भने ज्यान गुमाउने एम्बुसझैँ बनेका छन् । कारण यी पुलहरु यति खतरनाक छन् कि दुवैतर्फको रेलिङ छैनन्, भएका रेलिङ पनि कमजोर र मक्किएको अवस्थामा छन् ।
अधिकांश पुलका दुवै साइडमा गल्छी तथा खोला र त्रिशूली नदी छ । रेलिङ नभएका र भएका पनि कमजोर अवस्थामा रहेका साँघुरा र जीर्ण पुलबाट धेरैपटक सडक दुर्घटना भइसेको छ ।
२०३६ सालमा चीन सरकारले निमार्ण गरिदिए पनि उचित मर्मत सम्भार तथा संरक्षणको अभाव तथा सवारी दुर्घटनाका कारण यी पुलहरुले एम्बुसको रुप धारण गरेका हुन् ।
६ मिटर चौडाइ र २० मिटरदेखि ४८ मिटरसम्मको लम्बाइ रहेका यी पुलहरुबाट भएका सडक दुर्घटनामा सयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाइसकेको चितवन तथा मुग्लिन प्रहरीको भनाइ छ ।
सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाले हरेक वर्ष पुल मर्मतका लागि बजेट छुट्टाउने गरे पनि एउटा सवारीलेले रेलिङ भाँचेर दुर्घटना भएपछि वर्षौंसम्म पनि रेलिङ नबन्ने गरेको मुग्लिन १ नम्बर पुलछेउका स्थानीय नकुल थापामगरले बताए ।
पुल नं. १ : १ नम्बर पुल
मुग्लिनबाट नाराणघाटतर्फ झन्डै ५ मिनेटको दूरीमा रहेको छ १ नम्बर पुल । यो पुलको दुवैतर्फको रेलिङ क्षतविक्षत अवस्थामा छ । पुलको रेलिङको एकातर्फको भागमा त्रिशूली नदी पर्छ भने भित्तापछि एउटा सानो खहरे छ ।
६ मिटर चौडाइ रहेको यो पुलमा एकैपटक दुईवटा गाडी हिँड्दा दुर्घटनाको जोखिम मोलनुपर्छ । स्थानीय र प्रहरीको अनुसार यो पुलमा कैयौँ पटक सवारी दुर्घटना भएको छ ।
३ वर्षअघि यो पुलबाट सवारी दुर्घटना हुँदा ७ जनाको घटनास्थलमै र अन्य थपको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको स्थानीयले बताए । ३ वर्षअघि भाँचिएको पुलको मर्मत हालसम्म नगरेको भन्दै स्थनीय आक्रोशित भए ।
पुल नम्बर २ : २ नम्बर पुल
यो सडक खण्डको १ नम्बर पुलपछि नजिकको दूरीमा रहेको अर्को पुलको नाम २ नम्बर पुल हो । यो पुलको अवस्था पनि उस्तै छ । दुवैतर्फका रेलिङ ठाउँ ठाउँमा भाँचिएका छन् भने पुलको भुइँ खण्डहर बनेको छ ।
कमजोर रहेको यो पुल पनि दुर्घटनाका लागि सवारी चालकको एक सेकेन्डको कम होसियारी नै काफी छ ।
पुल नम्बर ३ :३ नम्बर पुल
यो सडक खण्डको जोखिमयुक्त अर्को पुलको नाम हो ३ नम्बर पुल । यहाँका ३ वटा पुललाई नम्बरमा आधारमा छुट्टाइएको छ ।
यी ३ वटै पुलको दायाँबाँया एकातर्फ नदी र अर्कोतर्फ खोला–खोल्सी छन् । नाम मात्रको रेलिङ रहेका यो पुलका रेलिङ भाँचिएको ठाउँमा पनि मर्मत गरिएको छैन ।
पुल नम्बर ४ : कालीखोला पुल
चितवनको कालीखोला गाविसमा पर्ने अर्को जोखिमयुक्त पुलको नाम हो काली खोला पुल । यो पुलको एकातिर छेउमै त्रिशूली नदी छ भने अर्कोतिर काली खोला । दुवैतर्फ रेलिङ भाँचिएको छ, दूईभन्दा बढी ठूला सवारीसाधन पुलमा एकैसाथ पुलमा प्रवेश गर्दा हल्लिन्छ । रातिको समयमा सवारी चलाउन यो पुलमा निकै जोखिम रहेको सवारी चालकहरुले बताए । सवारी चलाउँदा पुलको दायाँ–बाँयाँ हेर्दा मन आत्तिने गरेको पोखरा–भैरहवा रुटका सवारी चालक कृष्ण पङ्गेनीले बताए ।
पुल नम्बर ५ : जलवीरे पुल
चितवनको चण्डिभञ्ज्याङ गाविस वडा नं. ९ मा रहेको अर्को जोखिमयुक्त पुलको नाम हो जलवीरे पुल । छ मिटर चौडाइ रहेको यो पुलको एकातर्फको पुरै रेलिङ भाँचिएको छ भने अर्कोतर्फ पनि छेउ–छेउको रेलिङ भाँचिएको छ र बीचमा जर्जर अवस्थामा ४ खम्बाको रेलिङ बाँकी छ । स्थानीयका अनुसार यो पुलको मोडमा हरेक दिन मोटरसाइलक दुर्घटना हुने गरेको छ । यही पुलमा केही वर्ष पहिले काठमाडौंको कीर्तिपुरबाट बराहक्षेत्र तीर्थयात्रामा निस्केको बस दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै ७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने भोलिपल्ट सोही ठाउँमा खाली ट्रक दुर्घटना भएको र त्यसको अर्कोदिन फेरि मोटरसाइलक गरी लगातार ३ वटा दुर्घटना भएको स्थानीय अमर अधिकारीले बताए । उनका अनुसार यो रेलिङ नभएको पुलको मोडमा दिन बिराएर साना–ठूला मोटरसाइकल दुर्घटना हुने गरेको छ ।
पुल नं ६ : ऋद्धिखोला पुल
मुग्लिन नारायणघाट सडक खण्डमा रहेको अर्को खतराजनक र बढी दुर्घटनाको सम्भावना बोकेको पुल हो ऋद्धि खोला पुल । ऋद्धिखोलामा रहेको यो पुलको पनि हालत यसअघि चर्चा गरिएका पुलको जस्तै छ । पुलको हालत यति खतराजनक छ कि कतिबेला कुन गाडी रेलिङ नभएको पुलबाट खस्छ केही भन्न सकिन्न । यो पुलको त्रिशूली नदीपट्टिको भागको पूरै रेलिङ भाँचिएको छ ।
पुल नं ७ :
यो दृश्य हो ऋद्धिखोला पुल पछि आउने अर्को पुलको । यो पुलको पनि एकातिरको रेलिङ पुरै भाँचिएको छ । पुलको बीच भागमा खाल्डो परेर ग्राभेल गरिएको छ । यो जीर्ण पुलको अवस्था पनि खतराजक र नाजुक छ ।
पुल नं ८ : मौरी पुल
राजमार्गमा रहेको अर्को खतराजनक पुलको नाम हो मौरी पुल । यो पुलको छेउमा बस्ने स्थानीय सार्की गुरुङका अनुसार केही दिन पहिले यो पुलबाट एउटा मोटरसाइकल खोलामा खसेको थियो । स्थानीयले घाइतेहरुलाई उद्धार गरेका थिए ।
पुल नं ९ : भोर्ले पुल
राजमार्गको अर्को खतराजक पुलको नाम हो भोर्ले पुल । त्रिशूली खोला साइडतर्फ यो पुलको आधा भागमा रेलिङ छैनन् । अर्को साइडतर्फका रेलिङको भाग पनि ठाउँ–ठाउँमा भाँचिएको छ । रातिको समयमाा रेलिङ भाँचिएको थाहा पाउनेगरी कुनै सङ्केत चिन्ह पनि राखिएको छैन ।
पुल नं १० : खानी पुल
मुग्लिन–नारायणघाट सडक खण्डमा रहेको अर्को जोखिमपूर्ण पुलको नाम हो खानी पुल । ६ मिटर चौडाइ र २८ मिटर लम्बाइ रहेको यो पुलको मुग्लिन खोलातर्फको रेलिङ पूर्णरुपमा भाँचिएको छ । यो पुलको अर्कोतर्फको भागमा पनि खोला रहेको छ । पुलमा तीव्रगतिमा दुईवटा ठूला सवारी प्रवेश गर्दा दुर्घटनाको उच्च जोखिम हुने सवारी चालकहरु बताउँछन् । थोरै मात्र असावधानी हुने हो भने रेलिङ नभएका कारण सवारी साधन सीधै त्रिशूली नदीमा खस्ने चालकहरुले बताए ।
पुल नं ११ : जुगेडी पुल
राजमार्गको अर्को जोखिमयुक्त पुल हो जुगेडी पुल । चितवनको जुगेडी खोलामा रहेको यो पुलको पनि रेलिङ भाँचिएको छ । पुरानो यो पुलको अवस्था पनि दर्दनाक छ । भाँचिएका रेलिङको मर्मत गरिएको छैन जसले गर्दा दुर्घटनाको उच्च सम्भावना रहेको छ ।
पुल नं १२ : खहरे पुल
६५ दशमलव ५० मिटर लम्बाइ र ६ मिटर चौडाइ रहेको राजमार्गको अर्को पुलको नाम हो खहरे पुल । यो पुल पनि जीर्ण अवस्थामा रहेको छ ।
खहरे खोलामाथि बनेको यो पुलको पनि ठाउँ–ठाउँमा दुवैतर्फका रेलिङ भाँचिएको छ । यो पुलमा पनि चालकको साना गल्ती नै दुर्घटनाका लागि काफी छ । यो पुलमा पनि बेला बेला मोटरसाइकल दुर्घटना हुने गरेको स्थानीयले बताए ।
पुल नम्बर १३ : लामुबालुवा पुल
सत्र किलो भन्ने ठाउँमा रहेको अर्को खतरनाक पुलको नाम हो लामुबालुवा पुल । यो पुलको त्रिशूली नदीतर्फका अधिकांश भागको रेलिङ भाँचिएको छ । स्थानीय पदममाया गुरुङका अनुसार यो पुलमा धेरै पटक सवारी साधान दुघर्टनामा परेका छन् । कैयौँले ज्यान गुमाएका छन् ।
मुग्लिन–नारायणघाट सडकखण्डको ३६ किलोमिटरभित्र रहेका १८ वटा खतराजनक पुलमध्ये हामीले १३ वटा पुलको तस्बिरमा चर्चा ग¥यौँ । बाँकी ५ वटा पुलहरु पनि जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् भने केही सामान्य अवस्थमा पनि छन् । सडक विभागका अनुसार यी पुल सँगसँगै यो सडकखण्डमा पुलजस्तै ६ मिटरसम्म लम्बाइका साना–ठूला गरेर १ सय ९५ वटा कल्भट रहेका छन् ।
पहिलो पाटो छ, मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डमा रहेका पुलको अबस्थावारे, तपाईं यो सडक भएर हिँड्नुभएको छ भने आफै पनि कैयौँ कुरा महसुस वा देख्नु भएको छ । अव हेर्नुहोस्, भिडियोमा कस्तो देखिन्छन् यी पुल :